Magnesia fanariana casting | Mpanamboatra serivisy manezioma manezioma OEM - Casting Minghe
Inona ny Casting Magnesium Die?
Magnesium Alloy Die Casting dia karazan-tsiranoka manezioma miorina amin'ny singa manezioma sy alloying, izay mety amin'ny fanariana ampahany. Araka ny fizotry ny famolavolana, ny alika manezioma dia azo zaraina ho alika manezioma alikaola ary firaka magnesioma vita. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny firafitra, ny mikraoba ary ny fananana misy eo amin'izy ireo. Ny firaka manezioma manezioma dia ampiasaina amin'ny ampahany amin'ny fiara, faritra misy milina, akorandriaka ary singa elektrika sns. firaka manezioma vita amin'ny laoniny dia ampiasaina amin'ny lovia manify, ampahany amin'ny extrusion ary famonoana, sns.
Ny firaka manezioma manezioma dia manana ireto toetra manaraka ireto: elanelan'ny mari-pana crystallization lehibe, fihenan'ny habetsahan'ny habeny ary ny fihenan'ny tsipika, habetsahan'ny eutectic kely, ny fahaizan'ny hafanana manokana, ny hafanana mitentina, ny hakitroky ny lohany sy ny ranon-javatra, ny fihenan'ny fluidity, ary ny fironana lehibe kokoa noho ny atsipazo firaka alimo
Serivisy famonoana maty manezioma tokana any Sina
Mitady ny ampahany amin'ny alika manezioma manify namboarin'ny mpanamboatra singa fanariana efa za-draharaha sy azo antoka? Ny serivisy fanariana maty ho an'i Minghe dia mety ho safidinao tsara. Manana traikefa maty manezioma 10 taona mahery izahay, manana ny fahaizana manamboatra vokatra manezioma tsotra na sarotra, ao anatin'izany ny singa manezioma maty manara-penitra avo lenta, singa manezioma manary fampiasam-bola ary singa manezioma maty manerantany mba hamaly ny fangatahanao amin'ireo mpandraharaha azo antoka, milina be pitsiny. sy ny fitaovana eo am-pelatanantsika. Ny fitaovana fanariana magnesia maty novidintsika dia tsy andriamby, mora atsipy, ary mazàna tsy mitaky famaranana. Ny singa majika maty manezioma antsika rehetra dia iharan'ny fitondrana fizahana mafy ataonay miaraka amin'ireo mpanara-maso voatondro, ny fizahana ao anaty ary ny fizahana farany feno vita amin'ny lafiny rehetra.
Tombontsoa azo avy amin'ny casting magnesium maty
- Ny ampahany sy ny singa manezioma dia manome tombo-kase henjana kokoa ho an'ny fittings
- Afaka mampihena ny vidin'ny famokarana ary tena matanjaka amin'ny fihenjanana be
- mahazaka hafanana tafahoatra
- Mora atsipy
- Fanoherana avo ny hafanana sy ny harafesina, fananana tsy miovaova ary fananana bebe kokoa
- Fiainana maharitra sy maharitra
- Lanja ambany ary mora raisina na apetraka
Tombontsoa amin'ny fanariana casting magnesium
Raha ampitahaina amin'ny metaly hafa, ny alika manezioma dia manana teboka miempo ambany sy hafanana manokana, ary ny angovo lany amin'ny fizotran'ny fiverenana indray dia 4% amin'ireo izay lanin'ny fanamboarana fitaovana vaovao.
Azo averina averina ahodina hanatratra ny kalitaon'ny firaka am-boalohany izy, fa ny fitaovana hafa kosa tsy afaka.
Ho fanampin'izany, ny famonoana maty alika manezioma dia afaka mamokatra vokatra 0.2mm, fitaovana hafa tsy afaka mahatratra.
Fanapahana maimaimpoana, fahombiazana avo lenta, fatiantoka fitaovana kely ary vidiny ambany.
Diecastingcompany.com - Manam-pahaizana momba ny Casting Magnesium
Raha mitady mpivarotra ianao mba hanomezana anao ampahany tsara manezioma maty natsipy, Minghe dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana mahomby indrindra sy manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana mari-pahaizana OEM manezioma maty manaparitaka ampahany amin'ny milina mandroso maty 1600T miaraka amin'ny fenitra indostrialy avo indrindra sy ny kalitao avo lenta. . Miaraka amin'ny traikefa niasa nandritra ny 20 taona mahery, izahay dia injeniera miorina tsara sy efa za-draharaha ao Shina, fanao isan-karazany manary maty manezioma maty araka ny ilainao. Miasa ho an'ny fiara, fitaovana ara-pitsaboana, injeniera, elektronika, simika, fananganana, aerospace ary indostria bebe kokoa.
Famaritana ny vokatra momba ny serivisy fananganana magnesia anay
Fitaovana fanariana magnesium maty marobe:
Mainty, voajanahary, manga, maintso ary samy hafa loko toy ny takiana aminao
Fanitsiana eo ambony:
Fipoahana fasika, fipoahana bala, poloney, fanodinkodinana, fanapoizinana, electrophoresis, chromate, fonosana vovoka ary hosodoko
Fomba fanodinana singa manezioma maty manezioma:
Fikosehana CNC, fihodinan'ny CNC, fandavahana CNC,
Fampiharana Die Casting:
Ny ampahany maty manezioma dia azo ampiharina amin'ny firavaka, Automobile, elektronika, famahanana tsy misy tariby, dash cam, recorder, mpandahateny Bluetooth, famantaranandro marani-tsaina, trano an-tsaina
Tombony azo avy amin'ny serivisy casting Casting Magnesium Die
Experience, marina ary milina matanjaka
Famonoana magnesium azo antoka
Mamolavola sy mamokatra ampahany magnesium mahazatra
Fahombiazana avo lenta sy fitehirizana vola
Miaraha mahatsapa famokarana maro karazana sy betsaka
Manome ny mpanjifa anjara avo lenta amin'ny fandaharam-potoana mitovy
Fandefasana ara-potoana, serivisy fijanonana tokana
Ny fandalinana tranga Minghe momba ny casting magnesium
Manana famolavolana ampahany sarotra ianao, ny Minghe Casting Company dia afaka manampy anao hamadika azy io ho tena izy. Miaraka amin'ny fitaovana mety, fahalalana ara-teknika matanjaka ary fifantohana amin'ny kalitao .. Avy amin'ny famolavolana fitaovana hatramin'ny famaranana ary avy eo hatramin'ny fandefasana azy, Minghe Casting dia manome antoka fa ny tetikasa rehetra dia vita amin'ny fenitra avo lenta ary ny didinao dia aterina ara-potoana, isaky ny mandeha .
Mandehana mijery bebe kokoa momba ny fizarana fizarana tranga >>>
Safidio ny Serivisy fananganana magnesium tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany manondrana magnesium dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom fanariana sinoa ny serivisy dia manome filaharana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny fepetra arosonao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana magnesium anao.
Manome serivisy fanaovana casting izahay:
Serivisy fanariana Minghe miasa miaraka amin'ny fanariana fasika casting fanariana vy casting fanariana fampiasam-bola very fanariana foam, sns.
Sand Casting dia fizotran'ny fanary nentim-paharazana izay mampiasa fasika ho fitaovana maodely lehibe hanaovana lasitra. Ny famoahana gravity dia matetika ampiasaina amin'ny bobongolo fasika, ary ny fanariana tsindry ambany, ny fanariana centrifugal ary ny dingana hafa dia azo ampiasaina ihany koa rehefa misy fepetra manokana. Ny famafazana fasika dia misy fatra mifanaraka amin'ny laoniny, sombiny kely, sombi-lehibe, sombin-javatra tsotra, sombin-javatra sarotra, singa tokana, ary be dia be no azo ampiasaina.
Fanariana bobongolo maharitra manana fiainana lava sy mahomby amin'ny famokarana avo lenta, tsy vitan'ny hoe manana refy marina tsara sy malefaka ambonimbony, fa manana tanjaka avo kokoa noho ny fanariana fasika ary tsy dia manimba raha toa ka araraka ny metaly anidina. Noho izany, amin'ny famokarana betsaka ny fanoratana metaly tsy ferrous kely, raha mbola tsy dia avo loatra ny teboka mandronika ny fitaovana fanariana vy dia aleon'ny rehetra manary vy.
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny bola dia satria ny fandefasana fampiasam-bola dia manana ny refy avo lenta sy ny famitana farany azy ireo, afaka mampihena ny asan'ny masinina izy ireo, saingy mamela kelikely fametahana milina kely amin'ireo faritra misy fepetra takiana ambonimbony kokoa. Azo jerena fa ny fampiasana ny fomba fanariana fampiasam-bola dia afaka mamonjy fitaovana milina marobe sy fanodinana ora ora, ary mamonjy akora metaly be dia be.
Fanariana sombin-javatra very dia ny fampifangaroana ireo savoka paraffin na modely misy foam mitovy amin'ny habe sy ny endrika fanariana azy ireo ho antokony maodely. Aorian'ny fanosotra sy fanamainana palitao marefo dia alevina ao anaty fasika quartz maina izy ireo ho an'ny maodely hovitrovitra, ary arotsaka amina tsindry ratsy handrehitra ilay modely. , Ny metaly ranoka dia mibodo ny toeran'ny maodely ary mamorona fomba fanariana vaovao aorian'ny fanamafisana sy fampangatsiahana.
Ny fanariana ny maty dia dingana fanariana vy, izay miavaka amin'ny alàlan'ny faneriterena avo amin'ny vy anidina amin'ny alàlan'ny lavaka famolavolana. Ny bobongolo dia mazàna vita amin'ny alloys mahery kokoa, ary ity dingana ity dia mitovy amin'ny famolavolana tsindrona. Ny ankamaroan'ny fanariana maty dia tsy misy vy, toy ny zinc, varahina, aliminioma, manezioma, firaka, firapotsy ary firaka vita amin'ny firamainty sy alloys. Minghe no tampon'ny tampon'i Shina serivisy fanariana maty nanomboka tamin'ny 1995.
Afovoany dia teknika sy fomba fampidirana vy metaly amin'ny lasitra mihodina haingam-pandeha, ka ny metaly ranoka dia mihetsika afovoany hameno ny lasitra ary hamorona casting. Noho ny fihetsehana afovoany dia afaka mameno tsara ny bobongolo amin'ny làlan-kizorana ny metaly ranoka ary mamorona ny faritra malalaka an'ny fanariana; misy fiantraikany amin'ny fizotran'ny metaly amin'ny vy izany, amin'ny fanatsarana ny toetra mekanika sy ara-batana amin'ny fanariana.
Fanerena fanerena ambany dia midika fa apetraka eo ambonin'ny lovia voaisy tombo-kase ny bobongolo, ary ny rivotra voahidy dia ampidirina ao anaty vilaniny mba hiteraka tsindry ambany (0.06 ～ 0.15MPa) eo ambonin'ny metaly metaly, ka miakatra avy amin'ny fantsom-panafody ireo metaly metaly fenoy ny bobongolo ary fehezo ny fomba fanamafisana. Ity fomba fanariana ity dia manana sakafo tsara sy firafitra matevina, mora ny manary casting be pitsiny matevina matevina, tsy misy riser, ary 95% ny taham-panarenana vy. Tsy misy fandotoana, mora mahatsapa ho mandeha ho azy.
Casting vacuum dia fizotran'ny fanariana vy izay alefa ao anaty efitrano fandraisam-bahiny ny metaly. Ny fanariana vacuum dia afaka mampihena ny atin'ny gazy ao anaty metaly ary misoroka ny fitrandrahana vy. Ity fomba ity dia afaka mamokatra filma vy vy mitaky fitakiana tena mitaky fitifirana ary mora tokoa ny manamboatra firaka titanium. Minghe Casting dia manana orinasa mpanamboatra fantsom-pako, izay ampy hamahana ny olana rehetra mifandraika amin'ny fanariana fantsona